Abaaro baahsan oo laga soo sheegayo Deegaanada Gobolada Jubbaland
Qaar ka mid ah Deegaanada Jubbaland ayaa waxaa xilligan ka jira Abaaro xoogan, kuwaas oo saameeyay Dadka iyo Duunyada ku dhaqan Deegaanada Jubbaland.
Waxgaradka iyo Odayaasha Deegaanada ayaa waxa ay codsi ujeediyeen maamulada kala duwan ee dalka ka jira iyo beesha caalamka, iyagoo ka codsaday in loo gar gaaro dadka ku dhaqan Deegaanadaasi.
Dadka Deegaanka ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore qeylo dhaan ku aadan Abaaraha ka jira Deegaanadooda maamulka Jubbaland ay u direen, iyagoo sheegay in dadka ay halis ugu jiraan in ay u dhintaan biyo la’aan.
Afhayeenka Laamaha amniga maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka kunool deegaano badan oo hoos yimaada magaalada Kismaayo ay ku jiraan xaalad adag oo dhanka Nolasha ah.
Afhayeenka ayaa ugu baaqay Ganacsatada Soomaaliyeed iyo sidoo kale maamulka Jubbaland in ay si deg deg ah u soo gar gaaraan dadka kunool deegaanada ku yaalla duleedka magaalada Kismaayo oo uu ka mid yahay deegaanada Cabdalla Biroole.
Shalay ayay aheyd markii Magaalada Kismaayo uu ka dhacay Kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa Abaaraha baahsan ee ka jira qaybo ka mida Dhulka Jubbooyinka.